Astrology Archives - Khit Alite
Astrology / Knowledge / News
သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ (အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ= ၁) (က-ခ-ဂ-ဃ-င=၂) (စ-ဆ-ဇ-စ်-ည. = ၃) (ယ-ရ-လ-၀. = ၄) (ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ. = ၅) (သ-ဟ. = ၆) (တ-ထ-ဒ-ဓ-န-ဌ. …
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၁၁.၁၀.၂၀) မှ (၁၇.၁၀.၂၀) ရက် ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်စာဟောစာတမ်းကို အားလုံးဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာရပ်အတိုင်းတွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပီး ကံအညံ့ အဆိုးများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင် ကြပါစေ။ ၁။ တနင်္ဂ​နွေ ၂။ တနင်္လာ ၃။ အင်္ဂါ ၄။ …
17.9.2020 မှ 23.9.2020 အထိ ၇ရကျသားသမီး တဈပတျစာဟောစာတမျး
September 17, 2020 September 19, 2020 - by admin
17.9.2020 မှ 23.9.2020 အထိ ၇ရကျသားသမီး တဈပတျစာဟောစာတမျး ၇ရကျသားသမီးအပေါငျး ကောငျးသောလိုအငျဆန်ဒတှပွေညျ့ဝပါစေ။ကနျြးမာပွီး ရောဂါဘယတှကေငျးဝေးနိုငျကွပါစေ။ ဆရာငွိမျးအေးလူ(ဗဒေငျသုတသေီ) 0977 5555 695 09 44 5555 695 #တနင်ျဂနှေ ဤကာလအတှငျးငှကွေေးကိစ်စအ၀၀အတှကျပူပနျရတတျပါတယျ။အသုံးအစှဲအပေးအယူတတျဖို့လိုတဲ့အခြိနျ ပါပဲ။ ဝနျထမျးလခစားဖွဈပါက မိမိအပွောကွောငျ့ တဈဖကျသူ၏ အငွိုးအတေးပွုခွငျး၊ အမုနျးပှားခွငျးကို ခံရ တတျပါသညျ။ ကနျြးမာရေးမှာ မတျောတဆ ထိခိုကျအနာတရဖွဈတတျခွငျး၊ …